WAV Converter Online - Mba ampitao amin'ny WAV ny raki-peo
Mba ampitao amin'ny WAV ny raki-peo -tserasera. Tsy mila famindrana rakitra ilaina!
* Rehefa mampiasa ny haitao farany fitetezam-paritra farany vaovao izahay dia tsy manohana afa-tsy ny kinova farany roa an'ny Chrome amin'izao fotoana izao. Mpanara-maso maro kokoa no hotohanana tsy ho ela.
Tsy manam-paharoa ireo mpamadika feo an-tserasera: tsy mila mamindra ny rakitrao amina serivera tsy lavitra izy ireo mba hanovana azy ireo, ny fanovana audio dia ataon'ny mpitety tranonkala ihany! Zahao ny fizarana "Tsy misy famindrana angona" eto ambany raha te hahalala bebe kokoa.
Ireo mpanova an-tserasera hafa dia mazàna mandefa ny rakitrao amina mpizara iray hanovana azy ireo ary avy eo alaina ao anaty solosainao ireo rakitra voaova. Midika izany fa raha ampitahaina amin'ireo mpanova an-tserasera hafa dia haingana ireo mpanova audio antsika, ara-toekarena amin'ny famindrana data, ary tsy fantatra anarana (voaaro tanteraka ny fiainanao manokana satria tsy nafindra amin'ny Internet ny data-nao).
Azonao atao ny mamadika tahiry audio tsy voafetra nefa tsy mila mametraka rindrambaiko, tsy mila misoratra anarana ary tsy mila mamindra ny fisieo.
Manantena izahay fa nankafizinao izany!
Izahay dia mamolavola fitaovana an-tserasera novonoina teo an-toerana tamin'ny fitaovanao. Tsy mila mandefa ny rakitrao, data ary rakipeo amin'ny alàlan'ny Internet ny fitaovanay mba hikirakirana azy ireo, ny asa rehetra dia ataon'ny mpitety tranonkala ihany. Izany dia mahatonga ny fitaovantsika haingam-pandeha sy azo antoka.
Raha ny ankamaroan'ny fitaovana an-tserasera hafa dia mandefa rakitra na data hafa amin'ny lohamilina lavitra, tsy izahay kosa. Miaraka aminay dia voaro ianao!
Mahatratra izany isika amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo haitao web farany: HTML5 sy WebAss Assembly, endrika kaody izay tantanan'ny mpitety tranonkala mamela ny fitaovantsika an-tserasera hanao haingam-pandeha eo an-toerana.
Fampahalalana momba ny format audio
MP3 (fantatra amin'ny anarana hoe MPEG-1 Audio Layer III na MPEG-2 Audio Layer III) dia mampiasa fandefasana data lossy, midika izany fa esoriny ny ampahany amin'ny angon-drakitra amboariny. Ny angon-drakitra noravahan'ny MP3 compression dia mifanandrify amin'ny feo tsy henon'ny ankamaroan'ny olona. Ity karazana fampandrenesana ity dia maharesy kalitao kalitao, fa izay tsy fantatry ny ankamaroan'ny olona. Ny fanerena MP3 matetika dia mahatratra eo anelanelan'ny 80% sy ny fampihenana ny haben'ny 95%.
WAV (Waveform Audio File Format) no format lehibe ampiasain'ny Windows ary ny rakitra amin'ity format ity dia matetika misy audio tsy voapetaka. Ny fanodinana ambany dia ny endrika linear pulse-code modulation (LPCM), natao ihany koa ho an'ny CD izay nakana ny audio tamin'ny 44100 Hz ary 16 bit isaky ny santionany.
M4A (na MP4 dia mijoro ho an'ny MPEG 4 Audio) dia mampiasa ny fenitra Advanced Audio Coding (AAC) mba hanomezana fahatapahan-peo audio, midika izany fa tafiditra amin'ny haavo very ny kalitao izay matetika tsy azo fehezina. Ny kalitao audio dia tsara kokoa noho ny MP3 amin'ny haben'ny rakitra mitovy. Ny iTunes Apple dia manokatra ny rakitra M4A saingy miaraka matetika amin'ny Apple Lossless Audio Codec (ALAC) ny fandefasana data very, izany hoe tsy misy data sy kalitao very.
FLAC (Free Lossless Audio Codec) dia endrika fanodinana audio tsy manam-petra izay midika fa tsy misy fatiantoka vita amin'ny famoahana azy ny audio azy. Ny habe amin'ny rakitra dia azo ahena hatramin'ny 70% amin'ny fampiasana ny FLAC tsy misy fatiantoka kalitao.
OGG dia endrika misy rakitra audio izay ampiasain'ny rakitsary mazàna miaraka amina codecs maimaimpoana maimaim-poana Xiph.org: Ogg na Opus ho an'ny famoahana audio lossy sy FLAC ho an'ny fanodinana feo tsy misy fatiantoka.
AIFF (Audio Interchange File Format) dia novolavolain'i Apple ary nampiasaina tamin'ny solosaina Mac. Ny angon-drakitra ao anaty rakitra ao amin'ny ankamaroan'ny rakitra AIFF dia tsy misy fanovana miendrika pulse-code (PCM) izay midika fa ny haben'ny rakitra dia mety betsaka raha ampitahaina amin'ny fanamafisam-peo audio toy ny MP3 sy M4A.
© 2021 itself tools. Zo rehetra voatokana.